She - inkanyezi ekhanya kakhulu futhi ome njengeqanda ka-1990, blonde eside-onezinwele ezimhloshana nge amabele omangalisayo futhi okhalweni ezincane. Ilokhu smiling Hollywood prima nge sibalo eziyengayo futhi "iskrinkoy" emehlweni. Yebo, - Pamela Anderson, biography kanye nempilo yakho oluthatha ezingqondweni nasezinhliziyweni izigidi ababukeli emhlabeni wonke.
Kodwa bambalwa abantu bazi mayelana iminyaka yokuqala yokuphila kwakhe lokhu seductress ebukekayo, ukudunyazwa wakhe futhi ukulahlekelwa, kanye nomndeni wakhe kanye imvelo siqu.
Ngakho, jwayelana - Pamela Anderson. Biography, empilweni yakho, umyeni wakhe nezingane - zonke lezi zihloko, kuzoxoxwa ngakho esihlokweni sethu.
Unina wamadodana asekhulile
Manje Pamela Anderson - umbukwane owesifazane oneminyaka engu-amahlanu njengezindawo ezigqamile futhi abasha, njengoba kwaba yiminyaka engamatshumi amabili edlule. Muva nje, eseneminyaka kancane washintsha isitayela izingubo zabo baqala agqoke iziketi isikhashana kanye neckline kancane ephakeme. Kungani akunjalo?
Iqiniso lokuthi Pam - umama wamadodana amabili omdala. Okwesikhathi esithile abantwana manje omdala ka Pamela Anderson waqala ukuvela naye emaphathini imfashini kanye esiza abantulayo kusihlwa.
Naphezu kwezingqinamba nokususa isithombe actress, sifisa ukuba agqoke respectably, kodwa ubukeka emangalisa, sengathi engu efanayo eko amadodana.
Kanjani yena wakwenza njani lokho?
Iqiniso liwukuthi kukho konke ukuphila kwakhe imodeli American nomlingisikazi izikhathi eziningana ukuze kuxazululwe izinkinga ukuhlinzwa isikhumba.
Ukuze uthuthukise ucezu yayo enhle kakade, uPamela kabili esifubeni akhishwa le abicah (ithi, izimila nesisindo esingaba amakhilogremu amathathu), liposuction okhalweni, owethulwa collagen imijovo ezindebeni zakhe nezihlathi, namazinyo zibe mhlophe, ushintshe nekhala.
Manje, sibonga bonke laba namaqhinga ezibizayo, Anderson kungokwaphakade darling abasha futhi emuhle Hollywood, okuzuzisayo namadodana akhe.
Njengoba-ke uthi uqobo Pamela Anderson? Mayelana ubuhle, izingane kanye umsebenzi, yena kungaphela amahora uxoxa. Ngokwesibonelo, u-Pam abelana amadodana omdala ayizange ukubukeka namahloni eziyengayo unina kanye nomsebenzi wakhe yokumodela. Ngokuphambene nalokho, benza nomdlandla kakhulu unina lovely, futhi usihloniphe.
Seductive imfashini imodeli wathi izikhathi eziningi ukuthi akukho okufihlekile izingane zabo. Bakhulela singangenwa umoya wokuzibusa kanye nenkululeko, ukuphila komuntu unina njalo phambi kwamehlo abo.
Yini izingane ukubona Pamela Anderson? Ake sithole ukuthi kwakungani. Kodwa ngaphambi kokuba lokho priotkroem steel kwesihenqo Pam intsha ezijulile futhi sibona ukuthi kwakunjalo ekuqaleni.
Umlando Omfushane ebuntwaneni
Anderson Seductive wazalwa ehlobo lika-1967 edolobheni elincane i-Canadian. Abazali wentombazane, izinceku elula kunalokho abampofu, ngakho ukunethezeka bling Pam wayengekho abakujwayele. Kodwa yena befisa ukuzwa konke lokhu, yena ngabe ngenjabulo adayiswa khona kwabo tetifundza ukuphila edolobheni, phakathi ukukhanya, intokozo nobuhle.
iminyaka Pamela sika kwentsha zazingelula. Kusukela ebuntwaneni yena ahlukaniswe charm isegazini nokuyenga, yingakho, wavuma ukuba actress yena, izikhathi eziningana zase adlwengulwe.
Naphezu kokuhlaselwa okukhulu ezinzima ukuhlukumezeka ngokomqondo, wakhula bejabule kakhulu, perky futhi ekhululekile.
Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme, waqala ukusebenza njengomuntu Uthisha ngokomzimba .... Ezimweni eziningi, lokhu kwaba yokugijima eminingi, nekutsi thishela usebente eziyengayo iningi ukuqeqeshwa ngokomzimba bonke ubudala futhi eminyaka.
Ngo show ibhizinisi uthisha osemusha weza ngengozi. Ngolunye lwalezo ezemidlalo isiqophi ikhamera wathumba kuye eduze phakathi kwabanye abalandeli futhi ngaleyo ndlela le damsels abasha elikhanyayo waphawula nabantu abalungile. Enye inkampani enkulu ekukhiqizeni ubhiya Pam okunikelwe inkanyezi e izimakethe. Yiqiniso, wavuma.
Yena izinkanyezi ku ukukhangisa ibingaba eyesikhashana ngempela. Kweso baduma, Anderson waqala ukuvela kokuthi ahlukahlukene TV. Lokhu kwalandelwa isimemo sicu photo e Playboy. Njengoba Pamela neze kwahluka nezindinganiso zokuziphatha eziqinile, yena wathokoza pose phambi amakhamera brilliant ukuthi kwamlethela udumo ziyashaqisa.
Ukuze omagazini abadala balandela isimemo kwesibhamu ukudlala indima ekulu "Baywatch," okuyinto wathola ukuqashelwa kazwelonke sifisa umdlali waseshashalazini.
Sekuvele samuntu ubuhle besifazane futhi athandeke nakakhulu, "lolwandle" isithombe lonke Melika. Futhi, kufanele ube elithembekile, hhayi nje Melika.
ukubukeka Bright umzimba wezemidlalo ka Pamela wenziwe furore engakaze ibonwe eYurophu nase-Australia. Kuthiwa ngisho amalungu umkhaya wasebukhosini eBrithani zanqotshwa abase wayemuhle futhi elikhangayo.
Ngemva impumelelo ngokumangalisayo "Ranger" kwaba esinye isilingo yimpumelelo ochungechungeni lwethelevishini - "VIP", okuyinto Anderson sidlala enye yezinkulumo nabalingiswa abasemqoka - eziwubala wokuvelela Valerie Irons.
Kube babesayenza ngokudubula abaningi ifilimu imikhiqizo, kodwa musa ukwandisa ukuthandwa uPamela. Naphezu bubuhle, ibukeka eziyengayo futhi okungavamile oyibamba ithalente, Anderson wayengakwazi ukuthatha indawo yabo efanele ohlwini professional Hollywood izinkanyezi.
Hhayi ukuthi udabuka kakhulu, kodwa kwaba ezingemnandi - kuyiqiniso.
nokuphila kwangasese kanjani kungamangalisa blonde? Pamela Anderson, owashonelwa umyeni wakhe sebeneminyaka nezingane zazihlale ekubonakaleni paparazzi American, neze namahloni, ukubonisa ubudlelwane babo esidlangalaleni. Akazange silalela lokho abanye ukucabanga ngaye, futhi akasidlanga inkulumo inhliziyo ngalokho bekufanele inkosikazi engcono nonina.
imodeli Fashion, kokuba ofuthelene nangokomzwelo, ngokuvamile falling in love izikhathi eziningi unqoba ezinhliziyweni zabantu.
Umyeni wakhe wokuqala kwaba wesigubhu abavelele olusemthethweni band ethandwa Tommy Lee. Ngemva ngemva kwezinsuku ezinhlanu nje bahlangana bashada.
Pam wayemthanda umfana ziyahlanya, ngaphandle shazi emuva. Wamnika izinto ezibizayo, etotoswayo futhi avikelwe. Nokho, ayikwazanga ngokuthi othembekile, kodwa unothando futhi ngokocansi - lokho ngokuqinisekile.
Ngomshado intsha isibe amahlazo abadumile. Abantu abasanda kushada babe ome njengeqanda ongagunci, ngamunye bavikela umbono wakhe futhi engafuni ukuba bavume. Nokho umshado angeke ngokuthi ingozi - wanika Pamela unamadodana amabili.
Entwasahlobo ka-1995, izwe lonke lahlakazeka abanye izindaba ezinhle: Pamela Anderson ukhulelwe! Ngenhlanhla actress abasha kwakungesona isiphelo - ayekufuna lo mntwana, wayefuna umndeni omkhulu nezingane eziningi, wayefuna ukuba umama.
Nokho, ezinyangeni ezimbalwa le ntombazane yayingakaze ibe amashwa - walahlekelwa ingane eside elindelwe. Lokhu kwabangela eziningi losizi Pam ukuhlupheka. Nokho, akazange adikile.
Ekwindla ka onyakeni ofanayo, "Beach" ngisebenzisa futhi wakhulelwa, ezinyangeni eziyisishiyagalolunye kamuva wabeletha ingane yakhe yokuqala - Brandon Thomas. Ngemva omunye unyaka nesigamu saba nengane yesibili - Dilan Dzhagger.
Babé kugesi sangempela umama wabo imfashini, kodwa, ngeshwa, asikwazanga ukulondoloza umshado abazali.
Ngonyaka kwesibhamu 1997 Tommy Lee eshaya umkakhe ephethe ingane ezandleni zakhe - indodana yakhe. Kuthiwa imbangela ukuxabana wakhonza njengephayona ulimi abukhali Pam, kodwa kungakhathaliseki ukuthi kwakungesani, ke akazange ayithethelele umkayo.
Inkantolo igwebe Tommy ukuba kuphele okungenani izinyanga eziyisithupha ejele futhi kwenqatshelwe ungasondeli kumkakhe eduze kwekhulu amamitha. Isehlukaniso kwaba elikhulu futhi impikiswano.
Nokho, ngemva konyaka sigameko, lo mbhangqwana ukubuyisana. Okokuqala zazikhuluma ocingweni ke ihlelwe ukuvakashela cafe. Mhlawumbe kwakungenxa ngenxa nokubuyisana abafana abancane, kodwa, noma Pamela noma ukuqondiswa ngokuthatha Lee emuva, ukuphila kwabo okusha ndawonye lwathatha izinyanga ezimbalwa kuphela. Amadodana wahlala nomama wakhe.
Ngemva kwalokhu, Pamela Anderson nezingane zakhe ziye zaya eziningi kobunzima nezinkinga. Le ntombazane kwadingeka asebenze kanzima ukuze bazondle ngokwabo futhi abafana babo khona ngokunganaki. Yena kumafilimu eziningi nasemidlalweni ewuchungechunge yethelevishini, waba nengxenye ngokoqobo show, ngisho wahlanganyela dubbing opopayi!
Sonke lesi sikhathi actress ngenkuthalo ufuna Olwa Iyafaneleka isandla sakhe senhliziyo. Ayekufuna amadodana kababa wakhe futhi umngane, kodwa ngeshwa, bazithola kuphela ubuhlungu nokudumala.
Ngo-2006, u-Pam osanda kushada rapper futhi umlingisi Kid Rock. Umshado kwakuzoba serene futhi ujabulise, ngisho Anderson isinqumo sokuthi ingane yesithathu. Nokho, waphinde waba yisisu. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva lo mbhangqwana behlukana.
Izingane Pamela Anderson sonke isikhathi babe eduze umama wakhe othandekayo, wakhathazeka kakhulu ngakho nakuba kuze kube sekupheleni futhi ngingazazi zonke izinkinga zayo futhi izinkathazo.
Ngemva kwesikhathi esithile ngemva kwekhefu ukuze Pam wabuyela altare, kulokhu Rick Salomon (ifilimu umkhiqizi). Umshado akuhlalanga nonyaka. Ngemva kweminyaka emihlanu, abashadayo wangaphambili zama avuselele ubuhlobo, kodwa umshado wabo futhi kuhlulekile.
Manje actress usekhululekile futhi. Yena bamatasa kulo ukumodeliswa ibhizinisi, esiza abantulayo nokuvikelwa kwemvelo.
Pamela Anderson, abanezingane esezindala njengoba enhle ebukekayo njengoba wayengayi ukuphuma, ephelezelwa abafana. Nokho, muva nje, yena uthanda ukukhombisa umphakathi ubuhle babo futhi pose nabo phambi kwawo, ukhanya ikhamera.
Izingane Pamela Anderson kuyinto photogenic kakhulu, kuhluke ukubukeka elikhanyayo umbukwane nothando ubukhazikhazi. Babehlale bagqoke smartly futhi nge ucwebezela ngendlela ekhangayo, ngasiphi ngubo ngamunye ayicabangile nemininingwane emincane futhi ibonisa isitayela ngabanye womnikazi wayo.
Ake sibheke le ntsha eduze.
Brandon Thomas futhi Dilan Dzhagger ngihlala nomama wakhe Malibu. Bathanda ebhishi, ulwandle namanzi ezemidlalo. Ezishukiwe futhi akhishwa up, imini nobusuku bangakwazi yamaphiva ukuthamela ilanga noma ukuchitha amahora ukuhamba emagagasini kanye emanzini ajulile.
The guys banobungane kakhulu, ngokuvamile babebhekwa ndawonye, bafunela efanayo nokubukwa ukuphila.
Ngokwesibonelo, simthande ukugibela emadlambini, ukubhukuda ngaphansi kwamanzi, bahamba ngezinyawo phezu kwezingqimba boutiques imfashini kanye ... kukhona kokubili ziyahlanya simdumise umama omuhle, uyaziqhenya zakhe futhi ondle wakhe.
Njengoba ubona, akucaci kuze kube sekupheleni, ukuze abantu abasha ozonquma unikele ukuphila kwakhe. Mhlawumbe kuzoba show ibhizinisi, njengoba amadodana ka-Pam kakade anezinye nesipiliyoni ukukhangisa sokudubula kwezohwebo.
Ngokwesibonelo, lapho eseneminyaka engu-iminyaka eyishumi nesishiyagalombili, indodana Pamela Anderson Dylan Jagger Lee wathatha igxathu lakhe lokuqala ngqa njengesibonelo. Yena inkanyezi kuvidiyo omnyama nomhlophe ukuze indlu fashion e-United States, lapho ababedlala isiginci hit zonke ubuhle bayo kanye izikhulu.
Uzomangala ukuthola ukuthi, into abantu abasha baya futhi upapa - wabanika ubuntu bakhe ome njengeqanda kanye nesifiso esivuthayo sokuthuthukisa umculo.
Manje Dylan uyaqhubeka ukubakhanyisela catwalks engcono emhlabeni, hhayi kude ngemva kwakhe, uBrandon. Muva nje, i yokugcina iqhaza kule fashion bubuhle ukukhombisa Dolce Gabbana.
Sithemba ukuthi maduze nje Brandon and Dylan athi angama emhlabeni wonke, ekhazimulisa Mommy ezinhle njengoba nje wayeke uyakhazinyuliswa kubo.
Kanjani ukuze kusheshiswe kukhompyutha yakho